မြီးကောင်ပေါက်ကိုအဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသနည်း ဦး နှောက်ဒေသများသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်ဆုလာဘ်ခံစားမှုကိုဖျန်ဖြေပေးခြင်း (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
အဘယ်အရာကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လှုံ့ဆျောပေးသလဲ ဆယ်ကျော်သက် (2010) ကိုဖြတ်ပြီးဆုကြေးအာရုံဖြန်ဖြေဦးနှောက်နေရာများ
Cereb ။ cortex (2010) 20 (1): 61-69 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhp078
ပထမဦးစွာအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: ဧပြီလ 30, 2009
လင်ဒါဗန် Leijenhorst1,2, Kiki Zanolie1,3, Catharina အက်စ်ဗန် Meel1,2,4, P. Michiel Westenberg1,2, Serge ARB Rombouts1,2,5 နှင့်Eveline အေ Crone1,2
1စိတ်ပညာဌာန, Leiden တက္ကသိုလ်, 2300 RB Leiden, နယ်သာလန်
2ဦးနှောက်နှင့်အသိမှတ်ခံစားမှုအဘို့အ Leiden Institute မှ, 2300 RC Leiden, နယ်သာလန်
3စိတ်ပညာဌာန, Erasmus တက္ကသိုလ်ရော့တာဒမ်, 3000 DR ရော့တာဒမ်, နယ်သာလန်
4လက်တွေ့စိတ်ပညာဌာန, အခမဲ့တက္ကသိုလ်အမ်စတာဒမ်, 1081 BT အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
5ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ, Leiden University Medical Center က, 2300 RC Leiden, နယ်သာလန်ဦးစီးဌာန
လင်ဒါဗန် Leijenhorst မှစာပေးစာယူနေရပ်လိပ်စာ။ စိတ်ပညာဌာန, Leiden တက္ကသိုလ်, စိတ်ဓာတ်သုတေသန Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden, နယ်သာလန်များအတွက် Institute မှ။ အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များအပြုအမူကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြားရှိစပ်လျဉ်းမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးမြှင့်အကျိုးစီးပွားကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်ကြောင့် striatum နှင့် prefrontal cortex နောကျဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုအချိုးမညီမျှမှု၏ဆုချမှ hypersensitive ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့အလားအလာဆုလာဘ်အထင်ကြီးသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိဆုလာဘ်ဖို့ပိုကိုတုံ့ပြန်နှင့်ဤသက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်ပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့အထိပြုလုပ်မရှင်းလင်းသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ 10 နှစ်အရွယ်မှ 12- ကိုမျှော်လင့်, ပြေစာနှင့် 14 နှစ်အရွယ်မှ 15- အတွက်ဆုလာဘ်များပျက်ကွက်၏သက်ရောက်မှု dissociate ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ပါရာဒိုင်းအသုံးပြုသောနှင့် 18- 23 နှစ်အရွယ်သင်တန်းသားများ.
ကျနော်တို့မသေချာမရေရာရလဒ်များ၏မျှော်လင့်ထဲမှာ, anterior insula ငယ်ရွယ်လူကြီးများနှင့်အတူနှင့်လူငယ်လူကြီးများချန်လှပ်ဆုလာဘ်မှ orbitofrontal cortex activation ကိုပြသော်လည်းအဆိုပါ ventral striatum, အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦးဆုလာဘ်-related အထွတ်အထိပ်ကိုပြသကြောင်းနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ပိုမိုတက်ကြွကြောင်းပြသပါ။ ဤရွေ့ကားဒေသများကွဲပြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲပြသ.
ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်ဆုချမှ hypersensitive သောယူဆချက်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အာရုံကြော activation ပင်ရှေးခယျြမှုမရှိခြင်းအတွက်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်များအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်မတူကြောင်းသရုပ်ပြအတွက်လက်ရှိစာပေမှဖြည့်စွက်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်ကိုနားလည်ဘို့အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
မကြာခဏဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်စေရန်မလိုအပ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုလူသိများသောမသေချာမရေရာအခြေအနေများအတွက်လုပ်နေကြသည်။ မရေမရာအခြေအနေတွေမှာရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သမျှအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်တဲ့အခါသူတို့ကအန္တရာယ်စဉ်းစားနေကြသည်။ အန္တရာယ်များအပြုအမူတစ်ခုတိုး (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အရှိဆုံးအဓိကလက္ခဏာများတစ်ခုဖြစ်သည်Arnett 1999; Steinberg 2004; Boyer 2006) ။ အပြုအမူအတွက်ဤပြောင်းလဲမှုလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးခြားနားချက်အကြံပြုထားသည်။ ဒါကသူတို့ကဤလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပေါ်ရာနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှရလဒ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေချိန်ဖြစ်သောကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ကွဲပြားခြားနားထားတဲ့မရေမရာအခြေအနေမှာလုပ်ဆောင်ချက်ယှဉ်ပြိုင်သင်တန်းများအကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါစေခြင်းငှါ, ဖြစ်ပါတယ်။ မတိုင်မီကလေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆုလာဘ် (တွေ့ကြုံခံစားလမျး၌ကွဲပြားမှု၏အန္တရာယ်များကိုယူပြီးဆီသို့ biased ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြBjork et al ။ 2004; et al စေသော။ 2004; Ernst et al ။ 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006; ဗန် Leijenhorst et al ။ 2006).
functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ဒေသများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အတော်များများကလေ့လာမှုများကို (ventral striatum အလားအလာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ရန်တုံ့ပြန်ကြောင်းပြသကြBreiter et al ။ 2001; Knutson et al ။ 2001; Dagher 2007; တွမ် et al ။ 2007), မကြာသေးခင်က Meta-analysis သည်ကအတည်ပြုခဲ့သော (Knutson နှင့် Greer 2008) ။ ငါဎထို့အပြင်အဆိုပါ anterior insula ရလဒ်များများ၏မျှော်လင့််ပတ်သက်နေခဲ့ကြနှင့်ဤဒေသအတွက် activation လည်းမကြာခဏ anticipatio နှင့်အတူဆက်စပ်မသေချာမရေရာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်n (Critchley et al ။ 2001; Volz et al ။ 2003) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူကြီးများအတွက်အများအပြားလေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြခဲ့ကြ medial prefrontal cortex (PFC), orbitofrontal cortex နှင့် anterior cingulate cortex အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် (Rolls 2000; Bechara 2001; Knutson et al ။ 2001; O'Doherty et al ။ ၂၀၀၁, 2002).
ဤအဒေသများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။ ယနေ့အထိအနည်းငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများရလဒ်တစ်ခုဟုထင်ရသောကိုက်ညီမှုပုံစံကိုပြသ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတလက်ပေါ်မှာလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆုချဖို့ ventral striatum ၏ sensitivity ကို "လျော့နည်းသွား" နဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကို (ventral striatum အတွက် activation ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်များအတွက်လျော်ကြေးပေးနိုင်ရန်အတွက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်အတွေ့အကြုံများကိုရှာမြီးကောင်ပေါက်ဦးတည်သွားစေရန်အကြံပြုထားသည်လှံကို 2000; Bjork et al ။ 2004) ။ အိုဎအခြားတစ်ဖက်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ rewar ဖို့ ventral striatum တစ်ခု "တိုးမြှင့" တုန့်ပြန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဃ (သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာ, နုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အလားအလာဆုလာဘ်ပေးရန်တုံ့ပြန်မှု၌ဤတိုး (ထို PFC ၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖှံ့ဖွိုးတိုးကနေရရှိလာတဲ့) (အန္တရာယ်များကိုယူပြီးဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် biases ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006; Ernst et al ။ 2006; ကာဇီ, ဂျုံးစ်, et al ။ 2008).
ဤအဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များ၏အနက်ကို2အကြောင်းပြချက်များအတွက်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပေါ်ဤအကြောင်းလေ့လာမှုများတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသောသူသင်တန်းသားများကို၏အသက်အရွယ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ကှဲလှဲရှိသေး၏။ မြီးကောင်ပေါက်ဥပမာ, အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို pubertal အပြောင်းအလဲများကလွှမ်းမိုးနိုင်ဟာအလွန်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအုပ်စုဖွဲ့စည်းရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများများတွင်ကျယ်ပြန့်အသက်အပိုင်းအခြားကနေဆယ်ကျော်သက်ပါဝင်သည်ပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်လေ့လာမှုအတွက် Bjork et al ။ (2004)အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုတစ်စုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု၏ပုံစံကျွန်တော်တို့ရဲ့အနက်ကိုဆီးတားခြင်းငှါအရာ 12-17 နှစ်ပေါင်းအသက်သင်တန်းသားများ၏ပါဝင်သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (မီးခိုးရောင်ဖြူကိစ္စအချိုးအစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တလျှောက်လုံးဆက်လက်သရုပ်ပြပါပြီGiedd et al ။ 1999; Gogtay et al ။ 2004), နှင့်လတ်တလောလေ့လာမှုသည်ဤဖွံ့ဖြိုးရေးအပြောင်းအလဲများကို (များစွာကိုဦးနှောက်ဒေသများအတွက် nonlinear ပုံစံကိုလိုက်နာကြောင်းပြသထားပါတယ်Shaw et al ။ 2008) ။ တစ်ဦးကစက္ကန့်အခက်အခဲကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ် Paradigm ကခက်ခဲရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အောင်ကြိုတင်အစီရင်ခံများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြိုတင်လေ့လာမှုများအတွက်ဆုလာဘ်သင်တန်းသားများကို '' တာဝန်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ကွဲပြားဆုလာဘ်ရယူများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်သို့မှီခိုခဲ့ကြသည်။ ဆုလာဘ်ဥပမာ (တုံ့ပြန်မှုကြိမ်အပေါ်မူတည်နိုင်ကြောင်း, Bjork et al ။ 2004) သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုတိကျမှန်ကန်မှု / ဖြစ်နိုင်ခြေတူညီသည့်အပေါ် (ဥပမာ, Ernst et al ။ 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006; ဗန် Leijenhorst et al ။ 2006; Eshel et al ။ 2007) ။ ထို့အပြင်, (ပြင်းအားဆုချBjork et al ။ 2004; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006), ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ (et al စေသော။ 2004; ဗန် Leijenhorst et al ။ 2006), သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးပြင်းအားနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ (Ernst et al 2005 ။ Eshel et al ။ 2007) ခြယ်လှယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဆည်းပူးနေသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အန္တာရာယ်မှ ventral striatum activation အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပြန်ပြောပြဖို့ထို့ကြောင့်ခက်ခဲသည်။ မကြာသေးမီကအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်လေ့လာမှုများကို (ventral striatum ၏ activation ပြောင်းလဲမှုများရှေ့အပေါ်တွင်အခြေခံအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြKnutson နှင့် Greer 2008) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကတိုးလာ ventral striatum activation လူကြီးများအတွက်အန္တရာယ်များကိုယူတစ်ခုတိုးလာလိုလိုလားလားနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, Knutson et al အပါအဝင်တစ်ဦးကြိုတင်လေ့လာမှုမှာ။ (2008) တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်အသုံးပြုသောနှင့်တာဝန်မသက်ဆိုင်သောဖြစ်ကြောင်းကြိုးဓါတ်ပုံတွေကိုပေးအပ်သည်။ ဤရုပျပုံ၏တင်ပြချက်ဟာ ventral striatum ၏တိုးမြှင့် activation ရန်နှင့်အန္တရာယ်များကို (Knutson et al ။ 2008) ယူမှတိုးမြှင့်စိတ်အားထက်သန်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက် ventral striatum ၏ activation အတွက်အထွတ်အထိပ်သူတို့ကိုအန္တရာယ်များကိုယူမောင်းလျှင်ထို့ကြောင့်ကြောင့်ဤဒေသတွင်မူအကျင့်လိုအပ်ချက်များကိုလွတ်လပ်သောဖြစ်သောမှအတိုင်းအတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်အဘယ်အဆင့်မှာနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အကြောင်းတရားများ၏တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုများစွာကိုမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံသောအန္တရာယ်အန္တရာယ်များအပြုအမူအနက်ကိုဘော်ပြကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသူတို့တစ်ဦးအတွက်အလားအလာဆုလာဘ် (အထင်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုများပါတယ်ရှိမရှိကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် စောစောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်) သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိဆုလာဘ်သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆင့်လူကြီးများ () ၏ထံမှမတူလို့ပဲ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတွင်ဤတတ်နိုင်သမျှကွဲပြားမှုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှန်ကန်ကမ္ဘာအန္တရာယ်များအပြုအမူအခြေခံသောလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြား။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤအသိပညာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေဆန့်ကျင်ဆယ်ကျော်သက််ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ပေးရန်ကြိုးစားမှုကူညီနိုင်ဘူး။ ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်ကနေပါဝင်သူများအကြားဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အခြေခံပညာကွဲပြားခြားနားမှုအပြုအမူအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအနက်ကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဒီအခက်အခဲန်းကျင်လုပ်ကိုင်ဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်ကြည့်မြင်အလားတူချဉ်းကပ်ဘို့အဆုလာဘ်များနှင့်စွန့်စားမှုသင်တန်းသားများကို '' အပြုအမူမသက်ဆိုင်သောနေသောတစ်ခုစမ်းသပ်တာဝန်, ( အသုံးပြု. ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ် Tobler et al ။ 2008) ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်အပြုအမူမရှိခြင်းအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှ related အာရုံကြော activation အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့ပဲ။
ကျနော်တို့အစောပိုင်းနှင့်အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့် fMRI သုံးပြီးငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့များ၏အာရုံကြောအလွှာနှိုင်းယှဉ်။ ဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေဦးနှောက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏ပုံစံကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့3တသားတည်းအသက်အရွယ်အုပ်စုများ (10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိ, 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိနှင့် 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိ) ပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သူ (ကပေါက်စက် Task ကိုဖျော်ဖြေDonkers et al ။ 2005), သေးငယ်တဲ့ငွေကြေးဆုလာဘ်ခန့်မှန်းရခက်နှင့်အပြုအမူမသက်ဆိုင်သောနေသောတစ်ဦးရိုးရှင်းသောပါရာဒိုင်း။ ဒီတာဝန်များတွင်ပါဝင်သူအသီး၏ရုပ်ပုံများကိုဆက်တိုက်တင်ဆက်ထားတဲ့အတွက်3slot ကစက်တွေရှုမြင်ကြသည်။ ဤအ3ဓါတ်ပုံတွေအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းသာအခါ, သင်တန်းသားများကိုပိုက်ဆံအနိုင်ရ။ အဆိုပါတာဝန်3ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများ၏တင်ပြချက်ကပါဝင်ပတ်သက်: ပထမဦးဆုံး 1 ဓါတ်ပုံတွေအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်တတိယ) ကို XXY ခွအေနအေအဖြစ်ရည်ညွှန်း (ကွဲပြားခြားနားသည်) အားလုံး3ပုံများ, 2) သည် XYZ ခွအေနအေအဖြစ်ရည်ညွှန်း (ကွဲပြားခြားနားကြသည်)2နှင့် 3) အားလုံး3ဓါတ်ပုံတွေ) ကို XXX အခြေအနေများအဖြစ်ရည်ညွှန်း (အတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံး2ဓာတ်ပုံများကိုအခါ, ဆုလာဘ်ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ (; ဤနည်း၌, ပါရာဒိုင်းကျွန်တော်တို့ကို (XYZ vs. XXY3ဓာတ်ပုံများကို၏ပထမဦးဆုံး3အားလုံး3ဓါတ်ပုံတွေကိုကွဲပြားခြားနားကြသည်အတူတူ vs. အခါ) ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်နဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်ကို Activation dissociate ခွင့်ပြုခဲ့ ) XXY vs. ကို XXX နှင့်ဆုလာဘ် (XXX က vs. XXY) ၏ပျက်ကွက်; သုံးခုဓါတ်ပုံတွေထဲကပထမဦးဆုံး2vs. တူညီတူဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ striatum, အ insula, နှင့် orbitofrontal cortex (OFC) အပါအဝင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မသေချာမရေရာအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသများဖော်ထုတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအယူအဆသည်ဤဒေသများမတူညီတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက် activation တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံတွင်ထင်ဟပ်သောအလုပ်လုပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေး, ပြသသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ linear နှင့် nonlinear ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံများအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယအယူအဆဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေဆုချမှတိုးချဲ့ sensitivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်လျှင်, ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအတွက် ventral striatum အတွက် activation အတွက်အထွတ်အထိပ်တွင်ထင်ဟပ်သင့်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရလဒ်များ၏မျှော်လင့်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းယင်း ventral striatum အပြုအမူလိုအပ်ချက်များကို၏မရှိခြင်းနှင့်ဤဒေသတွင်ဆုလာဘ်ဖို့တုန့်ပြန်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်တိုးလာသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်ဟုရှိမရှိကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုကိုပြသမယ်လို့ထားတဲ့စင်မြင့်မှာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသိအမြင်များကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးဆုလာဘ်များနှင့်စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေတာဝန်များကိုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု၏အနက်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။
53 ကျန်းမာ, ညာသန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကစုစုပေါင်း (18 အမျိုးသမီး; အသက်အရွယ် = 23 ဆိုလို, စံသွေဖည် [SD က] = 7) တဆယ် 20.2-1.6 တစ်နှစ်ကြားရှိယင်းလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့, တသောင်းရှစ် 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိ (10 အမျိုးသမီး; ယုတ် အသက်အရွယ် = 15.0, SD က = 0.7), နှင့်တဆယ်ခုနစ် 10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိ (8 အမျိုးသမီး; အသက်အရွယ် 11.6, SD က = 0.8 ဆိုလို) ။ အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်အားလုံးသင်တန်းသားများမှအသက် 18 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြသည်ကိစ္စတွင်ပါဝင်သူများအတွက်မူလတန်းစောင့်ရှောက်သူများထံမှရရှိသောခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု Leiden University Medical Center က (LUMC) မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Ethical ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။3နောက်ထပ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းသားများကိုကနေဒေတာများကြောင့်အနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ မည်သည့်ဦးတည်ချက်အတွက်3မီလီမီတာထက်ပိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သောသင်တန်းသားများအတွက်ဒေတာအတွက်စမ်းသပ်မှုကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်,3ပါဝင်သူ (14, 15 နှင့် 10 နှစ်အရွယ်) ၏ဒေတာဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှလှုပ်ရှားမှု 0.52-18 တစ်နှစ်ကြားရှိများအတွက် 23-0.68 တစ်နှစ်ကြားရှိများအတွက် 14 မီလီမီတာ, အ 15-0.62 တစ်နှစ်ကြားရှိများအတွက် 10 မီလီမီတာနှင့် 12 မီလီမီတာဖြစ်ခဲ့သည်။ အသက်အုပ်စုများအကြားပျှမ်းမျှလှုပ်ရှားမှုအတွင်းကွာခြားချက် (သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့P > 0.1) ။
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မတိုင်မီကအပေါင်းတို့, သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးပြောင်လှောင်စကင်နာပစ္စုပ္ပန်ခဲ့သည့်အတွက်တိတ်ဆိတ်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေး session တစ်ခုအဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ကယ့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) စကင်နာများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အသံများကို simulated သောဤလှောင်ပြောင်စကင်နာ, အရွယ်မရောက်သေးသူဟာစကင်နာပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေသားတကျဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏အပေါင်းတို့နှင့်သင်တန်းသားများကိုရန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှင်းပြဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ Wechsler အရွယ်ရောက်ထောက်လှမ်းရေးစကေး၏2subtests ၏အိုင်ကျူတစ်ခုခန့်မှန်းချက်ရရှိရန်အလို့ငှာ, အသက်-သင့်လျော်သောဗားရှင်း (Wechsler 1981) သို့မဟုတ်ကလေးများများအတွက် Wechsler ထောက်လှမ်းရေးအကြေးခွံ (Wechsler 1991) -Similarities နှင့် Block ဒီဇိုင်း-ခဲ့ကြသည်အားလုံးသင်တန်းသားများကိုအုပ်ချုပ်။ 10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိ, 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိနှင့် 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိအဘို့, ခန့်မှန်းချက်နောက်ပြီး IQ အသီးသီး 119.7 (SD က = 9.7), 106.0 (SD က = 9.0), နှင့် 108.7 (SD က = 9.4), ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ 10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိ '' ပျမ်းမျှအားအိုင်ကျူအခြား2အသက်အရွယ်အုပ်စုများမှသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ဆွေမျိုး (ခဲ့သည်F2,49 = 11.62, P = 0.001), ဒါပေမယ့်ခြုံငုံသင်တန်းသားများကို '' နောက်ပြီး IQ ပျမ်းမျှအကွာအဝေးအတွင်းကျဆင်းခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအစီရင်ခံအဆိုပါစမ်းသပ်မှုအပေါငျးတို့သဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှတစ်ဦး covariate အချက်အဖြစ်အိုင်ကျူထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အိုင်ကျူအတွက်ကွဲပြားမှုအဘို့အတညျ့ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘယ်သူအားမျှအိုင်ကျူကွဲပြားခြားနားမှုကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အိုင်ကျူကွဲပြားခြားနားမှုထပ်မံဖော်ပြထားကြသည်မဟုတ်။
အားလုံးပါဝင်သူတစ်ဦးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းသုံးပြီးစိတ်ရောဂါအခြေအနေများ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, ဦးခေါင်းဒဏ်ရာနှင့် MRI များအတွက် contraindications အဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူမျှမသင်တန်းသားများကိုမဆိုပြဿနာများကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ထို့အပြင်2အတွက်သင်တန်းသားများကိုအငယ်ဆုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများကလေးအပြုအမူစာရင်းအပေါ်မိဘ ratings သုံးပြီးအမူအကျင့်ပြဿနာများအတွက်ပြခဲ့ကြသည် (Achenbach 1991) ။ အားလုံးပါဝင်သူများအဘို့ရမှတ်အဆိုပါ nonclinical အကွာအဝေးအတွင်းကျဆင်းခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုပေါက်စက် Task ကိုကအရင်ကအသုံးပြုတဲ့ပါရာဒိုင်း၏ကလေးတစ်ဦး-friendly version ကိုဖျော်ဖြေ Donkers et al ။ (2005)။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေး3ဗလာ slot ကစက်တွေရဲ့တင်ဆက်မှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့တယ်။ 500 ms ပြီးနောက်တစ်အကြွေစေ့တစ် cue အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော 1000 ms များအတွက်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ (မဟုတ်ရင် passive) တာဝန်အတွက်စေ့စပ်သင်တန်းသားများကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ, ထိုသူတို့ cue ၏တင်ပြချက်အပေါ်သူတို့ဘက်၌တရားလက်ညှိုးနှင့်အတူတစ်ဦး prespecified button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စက်ကိုစတင်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု 1000-ms အချိန်ပြတင်းပေါက်အတွင်းပေးထားကြရသည်။ အဆိုပါ 1000-ms တုံ့ပြန်မှုင်းဒိုး3ဓာတ်ပုံများကိုအောက်ပါတစ်ခုချင်းစီ 1 ၏3ဖြစ်နိုင်သောအသီးအမျိုးအစားများ-တစ်ကီဝီတစ်သစ်တော်သီး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတစ်စုံတိုင်း 1500 ms (ကြည့်မြင်ကဒ်အထိုင်စက်တွေထဲမှာလက်ဝဲမှလက်ျာဘက်, ဆက်တိုက်တင်ဆက်ချယ်ရီ-ခဲ့ကြသည် သဖန်းသီး။ 1).
ဒီ pag အတွက်
ဥပမာ (a) တစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့် (b) အပေါက်စက် Task ကိုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှရလဒ်ကို display တွေ။ XXX က, XXY, ဒါမှမဟုတ် XYZ: သင်တန်းသားများကို cue တုံ့ပြန်နိုင်သည့်အတွက်တစ်ဦး 1000-ms အချိန်ပြတင်းပေါက်ပြီးနောက်3ဓာတ်ပုံများကို 1500 ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဆက်တိုက်တိုင်း3ms ထင်ရှား။ , သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးချင်းစီကို XXX ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်€ 0.05 အနိုင်ရခဲ့ခြင်းနှင့်အခြားအခြေအနေများအတွက်အနိုင်ရမရခဲ့ပေ။
ရုပ်ပုံများ3ဖြစ်နိုင်သောအမိန့်အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်: 1)3ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကို (ဥပမာ, ကီဝီ-သစ်တော်သီး-ချယ်ရီသီး, XYZ စမ်းသပ်မှုတွေအဖြစ်ရည်ညွှန်း), 2)2တူညီနှင့် 1 ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံ XXY အဖြစ်ရည်ညွှန်း (ဥပမာ, ကီဝီ-ကီဝီ-ချယ်ရီသီး, စမ်းသပ်မှုတွေ), သို့မဟုတ် 3)3တူညီဓါတ်ပုံတွေကို (ဥပမာ, ကီဝီ-ကီဝီ-ကီဝီ) ကို XXX စမ်းသပ်မှုတွေအဖြစ်ရည်ညွှန်း။ ဤရွေ့ကား3ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများ3စမ်းသပ်အခြေအနေများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ စမ်းသပ်မှုတွေတင်ပြခဲ့ကြသည်သောအမိန့်ကျပန်းကြီးနှင့်သင်တန်းသားများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်3ပုံအသစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်နှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းသားများကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကို XXX ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်€ 0.05 ရဖို့နဲ့သူတို့စမ်းသပ်မှုတွေ၏အခြားအမျိုးအစားများအပေါ်ပိုက်ဆံရဖို့မဟုတ်ကြောင်းမယ်လို့ကြိုတင်ညွှန်ကြားထားခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို 1000-ms cue တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်သောအခါ, တရားခွင်အဆုံးသတ်နှင့်သူတို့တစ်တွေ€ 0.10 ပင်နယ်တီရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုတွေ၏ထက်နည်း 5% အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအဆုံးမှာစုစုပေါင်းအနိုင်ရရှိတဲ့ (€ 1.50) သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုမှာပါဝင်များအတွက်ငွေကြေးပြန်လည်အဖြစ်လက်ခံရရှိကြောင်းပမာဏကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှုတစ်ဦးချင်းစီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်2မိကြာမြင့်ကြောင်း7ဖြစ်ရပ်-related Scan ဖတ်၏သင်တန်းကျော်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုသင်တန်းသားများကိုဦးခေါင်းကွိုင်တွဲနေတဲ့မှန်ကနေတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ကို projected ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကို, ကို XXX, XXY နှင့် XYZ စမ်းသပ်မှုတွေရောနှောခဲ့ကြရသော, 120 စမ်းသပ်မှုတွေစုစုပေါင်းနှင့်အတူတင်ပြထိုကဲ့သို့သော 60 XYZ စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စဉ်အတွင်း, 30 XXY နှင့် 30 XXX ကစမ်းသပ်မှုတွေအသီးအသီးပြေးအတွက် 60 စမ်းသပ်မှုတွေအတူစုစုပေါင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာသင်ယူနှင့်အန္တရာယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်း၏နှေးကွေးသောရငျ့ကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မသေချာမရေရာတိုးမြှင့်ဖို့ Pseudorandom နိုင်ရန်အတွက်3ဆက်တိုက်လှုံ့ဆော်မှုတင်ဆက်ထားပါတယ်ဖွငျ့ဤဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်ထိန်းချုပ်ထား။ ပထမဦးဆုံးအရုပ်ပုံ၏တင်ဆက်မှုအပြီးအားလုံးစမ်းသပ်မှုတွေတွင်,3၏စီးရီးအတွက်လာမယ့်ရုပ်ပုံတူခဲ့သောဖြစ်နိုင်ခြေအမြဲ 50% ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနညျးတူ,2တူညီဓာတ်ပုံများကိုတင်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်, တတိယရုပ်ပုံတူခဲ့သောဖြစ်နိုင်ခြေ 50% ခဲ့သည် (50% XYZ, 25% XXY နှင့် 25% ကို XXX စုံစမ်းအောက်ပါ Donkers et al ။ 2005) ။ 1 ms ၏နှစ်တိုးအတွက် jittered3နှင့် 500 ့အကြားရေရှည်တည်တံ့ fixation ၏ကာလ, စမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတွေအကြားမှာရှိတဲ့ကဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။
scanning အဆိုပါ LUMC မှာ 3-T က Philips ကစကင်နာအပေါ်တစ်ဦးစံလုံးဦးခေါင်းကွိုင်သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ functional ဒေတာတစ်ခုသုံးပြီးဝယ်ယူခဲ့သည် T2ကြားညှပ်ဝယ်ယူ, အချိန်အထပ်ထပ် = 38 ့, အချိန်ပဲ့တင်သံ = 2.75 ms, 2.211 × 30 မီလီမီတာ In-လေယာဉ် Resolution, ပြေးနှုန်း 2.75 volumes ကို အသုံးပြု. * -weighted gradient ကို-ပဲ့တင်သံပဲ့တင်သံ-ပြိုသွေးခုန်နှုန်း sequence ကို (2.75 တဆက်တည်း 230-မီလီမီတာ Oblique axial ချပ်, ) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုစကင်၏ပထမဦးဆုံး2volumes ကိုအဘို့အခွင့်ပြုရန်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြ T1-equilibration ဆိုးကျိုးများ။ high-resolution T2* -weighted ပုံရိပ်တွေနဲ့ high-resolution ကို T1-anatomical ပုံတွေကိုစကင်ကို session ရဲ့အဆုံးမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကိုဦးခေါင်းဝိုင်းရံတဲ့ခေါင်းအုံးနှင့်ရေမြှုပ် INSERT အသုံးပြု. ကန့်သတ်ခဲ့သည်။
fMRI Preprocessing နှင့်စာရင်းအင်းအားသုံးသပ်ခြင်း
ဒေတာကို preprocessing နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ SPM2 (သိမှု Neurology ၏ Wellcome ဦးစီးဌာန) ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ပုံရိပ်တွေတင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ်ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အချပ်ဝယ်ယူ၏အချိန်ကိုက်အတွက်ကွဲပြားမှုအဘို့အတညျ့ခဲ့ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ် volumes ကိုမှ Spatial ပုံမှန်ခဲ့ကြသည် T1 နှင့် echo-ပြိုပုံရိပ်တင်းပလိတ်များအသီးသီး။ အဆိုပါပုံမှန် algorithm ကိုကိုဆိုင်းအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပတျသကျတဲ့ nonlinear အသွင်ပြောင်းအတူတစ် 12-parameter သည်ဆှဖှေဲ့အသွင်ပြောင်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်စဉ်အတွင်းဒေတာ 3-မီလီမီတာကုဗ voxels မှ resampled ခဲ့ကြသည်။ Templates ကို (ထို MNI305 stereotaxic အာကာသပေါ်တွင်အခြေခံခဲ့သည်Cocosco et al ။ 1997) ။ functional volumes ကိုထက်ဝက်အများဆုံး isotropic Gaussian kernel ကိုမှာ 8-မီလီမီတာအပြည့်အဝအကျယ်နှင့်အတူပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPM2 အတွက်ယေဘုယျ linear မော်ဒယ် (GLM) ကို အသုံးပြု. တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များ '' ဒေတာပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ fMRI အချိန်စီးရီး2သီးခြားမော်ဒယ်များအတွက် canonical hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကို (HRF) နဲ့ convolved ဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးအဖြစ်လုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်နှင့်ဒုတိယမော်ဒယ်အတွက်တတိယစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုစတင်ခြင်းကြိမ်လှည့်ပတ်ဒုတိယစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုစတင်ခြင်းကြိမ်လှည့်ပတ်နေတဲ့သုည-ကြာချိန်ဖြစ်ရပ်အဖြစ်3ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများ (XXX က, XXY နှင့် XYZ) တွင်တစ်ဦးချင်းစီတရားခွင်လုပ်ပါတယ်။ အဆိုပါပါဝင်သူအဆိုပါ 1000-ms cue ပြတင်းပေါက်အတွင်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးရှိရာသူတို့အားစမ်းသပ်မှုတွေအဖြစ်သတ်မှတ်မှားယွင်းနေသည်စမ်းသပ်မှုတွေ, သီးခြားစီလုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်နှင့် fMRI လေ့လာဆန်းစစ်မှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေများအတွက်အကောင်းဆုံးသငျ့ canonical HRF ၏အမြင့်၏ parameter သည်ခန့်မှန်းခြေ pairwise ထူးခွားသညျ့အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်, ကြှနျုပျတို့ထင်ရှားသည့် XXY နှင့် XYZ (ဆိုလိုသည်မှာ, သင်တန်းသားများကိုပထမဦးဆုံးကွဲပြားခြားနားကြောင်းကို2ဓာတ်ပုံများကို vs. တူညီ [XX] ဖြစ်ကြောင်း2ဓါတ်ပုံတွေကိုမြင်ဘူးဘယ်မှာအခြေအနေကနှိုင်းယှဉ် [XY]) ၏နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဆနျ့ကငျြဘပုံများ, တွက်ချက် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်အလားအလာဆုလာဘ်ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံသောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံစမ်းသပ်မှုတွေ၏ရလဒ်ကို၏ "မျှော်လင့်" နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ကို activation ပုံစံများ။ ဒုတိယမော်ဒယ်, ကြှနျုပျတို့စမ်းသပ်မှုတွေ၏ရလဒ်ကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများနှိုင်းယှဉ်, XXX သို့နှင့် XXY အခြေအနေများများ၏နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေတွက်ချက်။ တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူဘို့တွက်ချက်ရရှိလာတဲ့ဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေဒုတိယအဆင့်ကိုအုပ်စုတစုကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးမှတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုအဆင့်တွင်တပြင်လုံးကို-ဦးနှောက်အခွအေနတအမြီးဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်တို့အကြားခြားနား tကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ပါဝင်သူကုသဤပုံရိပ်တွေအပေါ် -tests ။ မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်စာရင်းအင်းမြေပုံမှာ thresholded ခဲ့ကြသည် P <0.001,5တဆက်တည်း voxels တစ်ခုအတိုင်းအတာတံခါးခုံနှင့်အတူ။
စာရင်းအင်းလေ့လာဆန်းစစ်: ခေတ်-Related ကွာခြားချက်များ
ကျနော်တို့က3ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သော activation ၏ပုံစံအတွက်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသောကြောင့်, ကျနော်တို့ voxelwise activation အတွက်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုပြဒေသများတွင်ဖော်ထုတ်ရန်ကှဲလှဲ (ANOVAs) ၏လေ့လာဆန်းစစ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ (ပထမမော်ဒယ် XXY-XYZ ၏ထူးခွားသညျ့အတွက် (-1 -0 1) သက်ရောက်မှုများ, (-0.5 1 -0.5) quadratic, (-1 0.5 0.5) linear များအတွက်စမ်းသပ်ပြီးနှင့် curvilinear (0.5 -0.5 -1) ဒုတိယမော်ဒယ် (ရလဒ်ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့) အတွက်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်) နှင့်ကို XXX-XXY ။ ANOVAs 0.001 တဆက်တည်း voxels တစ်ခုအတိုင်းအတာတံခါးခုံအတူမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် uncorrected5တစ်စာရင်းအင်းခုံမှာသိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
imaging ရလဒ်များ: အကျိုးစီးပွားအားသုံးသပ်ခြင်း၏ဒေသကြီး
ကျနော်တို့ (SPM2 နှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက် MARSBAR Toolbox ကိုအသုံးပြုBrett et al ။ 2002) အကျိုးစီးပွား (Roi) ၏ဒေသဖျော်ဖြေဖို့နောက်ထပ် activation ၏ပုံစံများရဲ့အနှစ်သာရကမှလေ့လာဆန်းစစ်။ ကျနော်တို့ 6-မီလီမီတာအလင်းဆုံ ROIs အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားမှုများအတွက် ANOVAs စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသောဒေသများအတွက်အထွတ်အထိပ်လှုပ်ရှားမှု voxel မှာဗဟိုပြုဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီရုံးတင်စစ်ဆေးစတင်ခြင်းမှာစတင်ကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်အခြေအနေများများအတွက်အချိန်သင်တန်းများပျမ်းမျှအားဖြင့်ဤအ ROIs သွေးအောက်စီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခိုလှုပ်ရှားမှုအချိန်စီးရီး extract မှ MARSBAR ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအချိန်သင်တန်းများအတွက်ဖော်ပြထားတာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြသထားပါသည် ကိန်းဂဏန်းများ2နှင့် 3.
အသက် ၀ င်မှုမှ ၁၂ နှစ်အရွယ်၊ ၁၄ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အရွယ်လူငယ်များမှအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၃ နှစ်အကြားပါဝင်သူများအတွက် XXY> XYZ ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးကျေးဇူးအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရလဒ်များအားလုံး၏ ဦး နှောက်ရလဒ်များ P <0.001 မပြင်ဆင်ရသေးသောတံခါးခုံ (ထိပ် panel)၊ ၆ မီလီမီတာအလင်းဆုံ ROIs နှင့် anterior insula နှင့် striatum (အောက်ပိုင်း panel) အတွက်အသက် ၃ နှစ်အုပ်စုများအတွက်ပျမ်းမျှအချိန်သင်တန်းများ။
အသက် (၁၀) နှစ်မှ (၁၂) နှစ်အရွယ်၊ (၁၄) နှစ်မှ (၁၅) နှစ်အရွယ်နှင့် (၁၈) နှစ်မှ (၂၃) နှစ်အတွင်းပါဝင်သူများအတွက် XXX> XXY တို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရလဒ်များအတွက် ဦး နှောက်လုံးလုံးရလဒ်များ P <0.001 မပြင်ဆင်ရသေးသောတံခါးခုံ (ထိပ် panel) နှင့် XXY> XXX (အပြာရောင်ဖြင့်); ၆ မီလီမီတာလုံး ၀ ROIs နှင့် striatum နှင့် OFC (အောက်ပိုင်း panel) အတွက်အသက် ၃ နှစ်အုပ်စုများအတွက်ပျမ်းမျှအချိန်သင်တန်းများ။
ကျနော်တို့ဒုတိယလှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်းမှာလုပ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဒေတာအပေါ်တစ် ဦး GLM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူနှင့် 10-12 နှစ်အရွယ်, 14-15 နှစ်အရွယ်နှင့် 18-23 နှစ်အရွယ်များအတွက် XXO> XYZ ၏ voxelwise ဆနျ့ကငျြဘတွက်ချက်။ ဤဆန်းစစ်ချက်များအရအသက်အရွယ်အုပ်စုသုံးစု၏လှုပ်ရှားမှုနယ်မြေများထပ်နေသည်။ အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်, ရလဒ်မျှော်လင့်ညာဘက် anterior insula အတွက် activation နှင့်အတူတသမတ်တည်းဆက်စပ်ခဲ့သည် သဖန်းသီး။ 2ထိပ်တန်း panel က) ။ 10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိနှင့် 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိအဘို့, anterior insula activation နှစ်ဦးစလုံး hemisphere မှာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အုပ်စုများ ventral striatum နှင့် dorsal cingulate cortex အတွက် activation ပြွတ်ပြသခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောပြွတ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ MNI ကိုသြဒီနိတ်အစီရင်ခံကြသည် နောက်ဆက်တွဲဇယား 1.
အဆိုပါ XXY-XYZ ဆနျ့ကငျြဘအဘို့အသက်-related အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက် voxelwise ANOVAs စမ်းသပ်ခြင်းတစ်ခုံမှာမဆိုသိသာပြွတ်မှုမပြုခဲ့ P <0.001 ။ ပိုပြီးလစ်ဘရယ်တံခါးခုံမှာ (P <0.005), -1-0 1 နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် ANOVA စမ်းသပ်မှုသည်ညာဘက် anterior insula ရှိအသက်နှင့်အသက်သွင်းခြင်းကို linear ပြောင်းလဲမှု (အထွတ်အထိပ် ၄၂၊ ၁၂၊ ၃၊ z = 2.95), F1,47 = 11.24, P = 0.002 ။ ငါတို့သည်ဤ voxel မှာဗဟိုပြုတဲ့ 6-မီလီမီတာအလင်းဆုံရွယ်ဖန်တီးထပ်မံဤဒေသတွင် activation ပုံစံများသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဤရွယ်များမှထုတ်ယူဒေတာပေါ်အခြေအနေ (3) ANOVA ×အနေနဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စု (2) ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီရွယ်များအတွက်ပျမ်းမျှအချိန်စီးရီး၏အောက်ခြေ panel ကိုအတွက်ကြံစည်နေကြတယ် ပုံ 2။ ဒီရွယ်များအတွက် ANOVA အခွအေနေအပြန်အလှန်×တစ်ဦးသည်အသက်အုပ်စုတွင်ဖြစ်ပေါ်, F2,47 = 7.00, P = 0.002 ။ Follow-up, နှိုင်းယှဉ်ဤဒေသအတွက် 10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက် XYZ အခွအေနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ XXY တွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်, F1,16 = 11.26, P = 0.004 နှင့် 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိ, F1,17 = 3.62, P = 0.005 ။ အဆိုပါ 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိများအတွက်အခြေအနေများအကြားခြားနားချက် (သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့P = 0.19) ။
အဆိုပါ XXY-XYZ ဆနျ့ကငျြဘအဘို့အဘယ်သူမျှမကအသက်အရွယ်-related ပြောင်းလဲမှုများ striatum မှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး ANOVA ဤဒေသအားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများ (-9, 9,0မှာအထွတ်အထိပ်အတွက်တက်ကြွခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြ z ရလဒ်များအတွက်မျှော် = 4.57), F3,47 = 13.11, P <0.001 ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ ဤဒေသအတွက် ၆ မီလီမီတာလုံးလုံး ROI မှထုတ်ယူသောအချက်အလက်အပေါ် ANOVAs သည်အခြေအနေ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ F1,47 = 23.73, P <0.001 နှင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်အတူမျှသိသာအပြန်အလှန် (P = 0.1) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ striatum အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်တူညီသောအတိုင်းအတာအထိအလားအလာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်တွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာခဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေအသက်အုပ်စုများအတွက်နှိုင်းယှဉ်သီးခြားစီဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုများအတွက်ပိုကြီးတဲ့ ventral striatum တုံ့ပြန်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယင်း 10-12 နှင့် 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိထဲမှာ, XXY ခွအေနအေ (အ XYZ အခွအေနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာပိုမိုတက်ကြွစွာအတွက်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်P = အခွအေနေ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် 0.001), အရွယ်ရောက်၌ဤခြားနားချက်ကိုသာအဓိပ်ပာယျဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ် (ပြသသော်လည်းP = 0.09) ။
ရလဒ်များကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကို activation ပုံစံများကိုဆနျးစစျဖို့, အလားတူ GLM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတိယလှုံ့ဆော်မှုစတင်ခြင်းမှာလုပ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဒေတာအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀-၁၂ နှစ်အရွယ်၊ ၁၄-၁၅ နှစ်နှင့် ၁၈-၂၃ နှစ်အရွယ်များအတွက်သီးသန့်ခြားနားချက်များကိုတွက်ချက်ခဲ့သည်။ XXX> XXY (ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအပြောင်းအလဲ) ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အရွယ်လူငယ်များနှင့် ၁၄-၁၅ နှစ်အရွယ်များရှိ striatum နှင့် dorsal cingulate cortex တွင်အသက်သွင်းခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သဖန်းသီး။ 3ထိပ်တန်း panel က) ။ သိသာထင်ရှားသောပြွတ်အဆိုပါ 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိအဘို့မဟုတ်, ပင်၏တစ်ဦးထက်ပိုလစ်ဘရယ် uncorrected ခုံမှာမတွေ့ P <0.005 ။ အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အကြားရှိလက်ဝဲနှစ်ဖက်စလုံး PFC တွင်တက်ကြွမှုရှိကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။
XXY> XXX ၏ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည့် GLM (ချန်လှပ်ထားသည့်အကျိုးကိုပြန်လည်ရယူခြင်း) သည် ၁၀-၁၂ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြားရှိသူများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအစုအဝေးတစ်ခုကိုပြသခြင်းမရှိပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဘယ်ဘက် OFC ရှိဒေသတစ်ခုသည်အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၃ နှစ်ကြားရှိလူငယ်များအတွက်ချန်လှပ်ထားသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမမှန်ကန်သောတံခါးခုံအောက်တွင်ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် P <0.001 ။ သိသာထင်ရှားသောပြွတ်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာ MNI ကိုသြဒီနိတ်များခြုံငုံသုံးသပ်တင်ပြထားသည် နောက်ဆက်တွဲဇယား 2.
XXX-XXY ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်အသက်နှင့်ပတ်သက်သောအပြောင်းအလဲများအတွက် voxelwise ANOVAs စမ်းသပ်ခြင်းသည် XXX> XXY ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး၏တွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြုသည်။ Striatum တွင်အသက်သွင်းခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်များနှင့်လူငယ်များနှင့်ကွဲပြားကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခု uncorrected တံခါးခုံမှာ P <0.001, အ -0.5 1 -0.5 ဆနျ့ကငျြဘများအတွက် ANOVA စမ်းသပ်မှုဟာ ventral striatum အတွက်စပျစ်သီးပြွတ် (12, 9, -15 မှာအထွတ်အထိပ်, z တစ်ဦး quadratic ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံပြ = 3.68), F1,47 = 17.64, P <0.001 ။ ဤ voxel တွင်ဗဟိုပြု ၆ မီလီမီတာအလင်းလှိုင်း ROI မှထုတ်ယူသောအချက်အလက်များအပေါ်အသက်အုပ်စု (၃) ×အခြေအနေ (၂) ANOVA ကဤဒေသသည် XXX တွင်ပိုမိုတက်ကြွကြောင်း ၁၄-၁၅ နှစ်အရွယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဖော်ပြခဲ့သည်။ F1,17 = 22.84, P <0.001 သို့သော် ၁၀-၁၂ နှစ်အရွယ်များရှိအခြေအနေများနှင့်ကွာခြားမှုမရှိပါ (P = 0.41) နှင့် 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိ (P = 0.12) (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 3, အောက်ခြေ panel က) ။
လွတ်လပ်သောအသက်အရွယ်အုပ်စုများအရွယ်ရောက်ပြီးသူအုပ်စုတွင်ချန်လှပ်ဆုလာဘ်မှတုံ့ပြန်မှုခဲ့သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC အတွက်တစ်ဒေသထင်ရှားများအတွက်မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ခြားနားနေသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC (-0.5, 0.5 မှာအထွတ်အထိပ်, -1 အတွက်ဒေသတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်သော -27 -483ဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူတစ်ဦး curvilinear ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခု ANOVA စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည် z = 3.05), F1,47 = 11.99, P = 0.001 (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 3, အောက်ခြေ panel က) ။ ဤဒေသများအတွက် 6-မီလီမီတာအလင်းဆုံရွယ်အပေါ် ANOVAs အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအပြန်အလှန်×တစ်ဦးအခြေအနေဖြစ်ပေါ် F2,47 = 8.67, P = 0.001 ။ Follow-up, နှိုင်းယှဉ်ဤဒေသတွင်သာ 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက်လက်ခံရရှိခဲ့သောဆုလာဘ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဆုလာဘ်များပျက်ကွက်တစ်ခုတိုးချဲ့တုံ့ပြန်မှုပြသအတည်ပြု F1,14 = 7.38, P = 0.02 ။
ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်မသေချာမရေရာဆုလာဘ်၎င်းတို့၏ sensitivity ကိုအတွက်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပုံကိုမေးခွန်းအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အဆင့်ကာလအတွင်းမရေမရာဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်ကို Activation ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မတိုင်မီကလေ့လာမှုများ ( "overactive" နှစ်ဦးစလုံးဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်ကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီသွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006) နှင့် "underactive" (Bjork et al ။ 2004မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌) မက်လုံးပေး-related neurocircuitry ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကျနော်တို့အပြုအမူအပေါ်မှီခိုမဟုတျကွောငျးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်အတွက်ရလဒ်တစ်ခုပါရာဒိုင်း, အသုံးပြုခဲ့တဲ့တွင်ဤယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကွဲပြားပါတယ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်ကျွန်တော်တို့ကိုမသေချာမရေရာအောက်မှာဆုလာဘ် sensitivity ကိုအခြေခံကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ 3-10 တစ်နှစ်ကြားရှိ, 12-14 တစ်နှစ်ကြားရှိနှင့်အသက်အရွယ်-related ပြောင်းလဲမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအဘို့စမ်းသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ထားတဲ့ 15-18 တစ်နှစ်ကြားရှိ: အပြင်ကျနော်တို့ 23 ကွဲပြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်အာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
မသေချာမရေရာဆုလာဘ်ထားချက်အရလျှင်လူအပေါင်းတို့သည်အသက်အုပ်စုများ striatum အတွက်တိုးမြှင့် activation ပြသပေမယ့်ရဲ့ရလဒ်ကို processing အခါ anterior insula အတွက်စပျစ်သီးပြွတ်) လူကြီးနှင့်2မှ activation ပုံစံအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦး linear ကျဆင်းခြင်းပြသ 1): အဆိုပါလေ့လာမှု2အဓိကရလဒ်များ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် OFC အတွက်တိုးမြှင့် activation အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ဆုလာဘ်များပျက်ကွက်အများဆုံးတုန့်ပြန်သော်လည်းစမ်းသပ်မှုတွေ, အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်က, ventral striatum အတွက်တိုးမြှင့် activation အားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်လက်ခံရရှိဆုလာဘ်ပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုရှိကြ၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် overactive မက်လုံးပေး-related neurocircuitry ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောယူဆချက်ကိုထောကျပံ့, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအရှိဆုံးဆုလာဘ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏အဆင့်စဉ်အတွင်းအသံထွက်ကြောင်းပြသပါ။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို၏အလငျး၌ဤရလဒ်များကို (ကိုလညျးရှု overactive ဆုလာဘ်-related circuitry နှင့်နု PFC အန္တရာယ်များကိုယူပြီးဆီသို့အလားအလာဘက်လိုက်မှုမြီးကောင်ပေါက် circuitry သောအယူအဆမျက်နှာသာ Ernst et al ။ 2006; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006; ကာဇီ, Getz, et al ။ 2008).
ပထမဦးဆုံး2လှုံ့ဆော်မှုတူညီခဲ့ကြသည်များနှင့်အနိုင်ရများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေညွှန်ပြသည့်အခါရလဒ်များ၏မျှော်လင့်သည့် striatum အတွက် activation နှင့် anterior insula နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ insula အတွက် activation အသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်ဦး linear ကျဆင်းခြင်းပြသ; ဆုလာဘ်ထားချက်အရသည့်အခါဤဒေသတွင် 10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက် 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက်အများဆုံးတက်ကြွစွာ 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက်လျော့နည်းတက်ကြွစွာနှင့်အနည်းဆုံးတက်ကြွခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုသောပါရာဒိုင်းမှာတော့အလားအလာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်အများဆုံးမသေချာမရေရာနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ တူညီတဲ့ပုံ2၏တင်ပြချက်ပြီးနောက်တတိယရုပ်ပုံတူသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေတန်းတူဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ဒုတိယပုံတစ်ပုံကိုပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခါ, တစ်ဦးဆုလာဘ်မရှိတော့ဖြစ်နိုင်သောကြီးနှင့်အကျိုးဆက်အဖြစ်, ရလဒ်များ၏မျှော်လင့်နဲ့ဆက်စပ်ခြင်းမရှိမသေချာမရေရာရှိ၏။ anterior insula activation အတွက်အသက်အရွယ်-related ပြောင်းလဲမှုထို့ကြောင့်အနည်းဆုံးအား2လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်: အကျိုးကိုသို့မဟုတ် 1 လက်ခံရရှိများ၏မျှော်လင့်နဲ့ဆက်စပ် 2) အပြုသဘော arousal) သည်မသေချာမရေရာအမည်မသိရလဒ်ကိုထားချက်အရအခါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဆုံးဖြတ်ချက်များမသေချာမရေရာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအတွက် anterior insula ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသောမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ, (၏ရလဒ်များကိုနှင့်ကိုက်ညီများမှာPaulus et al ။ 2003; Volz et al ။ 2003; Huettel et al ။ 2005; Huettel 2006; Volz နှင့်ဗွန် Cramon 2006) ။ အဆိုပါ anterior insula မကြာခဏ psychophysiological arousal ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ဒါဟာ (ကဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်တုံ့ပြန်မှုထင်ဟပ်အားဖြင့် insula အကူအညီဆုံးဖြတ်ချက်ချကြောင်းအကြံပြုထားသည်Bechara 2001; Critchley et al ။ 2001; Paulus et al ။ 2003) ။ အားနည်းချက်တခုရှိပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှေ့အကြီးစားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအချက်ပြမှုများ (အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တစ်ဦးသတိပေးအချက်ပြအဖြစ်အစေခံရန်အကြံပြုခဲ့ကြBechara et al ။ 1997) ။ ဒီအယူအဆ၏အလငျး၌, အငယ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်တိုးမြှင့် insula တုံ့ပြန်မှုဆနျ့ကငျြပုံရသည်။ သို့သော်အခြားသောလေ့လာမှုများ (ဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ signal ကိုလုပ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်၏ salience ထင်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသင်္ချိုင်း et al ။ 2002), နှင့်ကြိုတင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ (အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များထားချက်အရသည့်အခါကလေးများကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအချက်ပြမှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုကောင်းအောင်ဤအချက်ပြသုံးစွဲဖို့ပျက်ကွက်Crone နှင့်ဗန် der Molen 2004, 2007; Crone et al ။ 2005) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာလူငယ်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်တိုးမြှင့် insula activation ဤဒေသ၏ကျက်ထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ အငယ်ဆုံးပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မသေချာမရေရာနှင့်ဆက်စပ်သောတိုးလာ psychophysiological arousal ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings စုဆောင်းမပြုခဲ့သော်လည်းယခင်လေ့လာမှုများကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation ၏ပုံစံများကြုံတွေ့ပတျသကျဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု (ဖော်ပြခဲ့သည်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆိုပါ ventral striatum အတွက်ပေမယ့်ဖွင့်သုံး, အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆိုပါ anterior insula အတွက် activation အကျိုးသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိရSamanez-လာကင် et al ။ 2007) ။ ဒီလေ့လာမှုကနေရလဒ်များ anterior insula မသေချာမရေရာအခြေအနေများတွင်ယေဘူယျအားဖြင့် arousal ထင်ဟပ်နေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အထောက်အကူဖြစ်စေအံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Huettel (2006) အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန် (အပြုအမူအန္တရာယ်) နှငျ့ ပတျသကျ. အလားအလာရရှိခဲ့နိုင်ဆုလာဘ် (ဆုလာဘ်အန္တရာယ်) နှင့်မသေချာမရေရာ၏ပမာဏနှင့်ပတ်သက်သောမရေရာ dissociated ။ သူ anterior insula အတွက် activation ရွေးချယ်တုန့်ပြန်ရွေးချယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောမရေရာကလွှမ်းမိုးခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များ anterior insula ဤဒေသတွင်ရလဒ်များ၏မသေချာမရေရာကိုယ်စားပြုတစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, တုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေး၏မရှိခြင်းအတွက်မသေချာမရေရာအခြေအနေများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံဒီတွေ့ရှိချက်မှထည့်ပါ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု (Preuschoff et al ။ 2008) ကို anterior insula အဆိုပါ striatum ဆုလာဘ်၏ပြင်းအားမှအထိခိုက်မခံသောကြောင့်ဆင်တူနေတဲ့လမ်းအတွက်မသေချာမရေရာ၏ဒီဂရီရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စာရေးသူဟာ anterior insula အဆိုပါ striatum အတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများအလားတူဖြစ်စဉ်များကိုထောကျပံ့နိုငျသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤဒေသတွင် activation အတွက် linear ကျဆင်းခြင်း anterior insula function ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်နုသည်နှင့်မမှန်သောအခြေအနေ၌ပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်ခန့်မှန်းရန်မြီးကောင်ပေါက်တစ် သာ. ကြီးမြတ်အခက်အခဲအကြံပြုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပြသထားတယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်, ဆယ်ကျော်သက်သူတို့ဆုလာဘ်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုခန့်မှန်းရခက်ခဲ့ကြောင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆုလာဘ်ထက်ပိုမကြာခဏပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမျှော်မှန်းထားသည်။ အတူတူယူ, မှန်သောဆုလာဘ်ထားချက်အရအတွက် anterior insula အတွက်တိုးမြှင့်တုံ့ပြန်မှုဘက်လိုက်မှုတိုးမြှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူဆီသို့ adolescents လိမ့်မည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ရှိကြောင်းတစ်ခုမှာရှင်းပြချက်ဟာ anterior insula အတွက်တိုးမြှင့် activation ကိုထိခိုက်အနုတ်လက္ခဏာကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဲဒါကိုဒုတိယရုပ်ပုံလွှာ (XYZ) ၏တင်ပြချက်မှာဖြစ်ပေါ်သည့်အခါနဲ့နှိုင်းယှဉ်တရားခွင်၏အဆုံး (XXY) မှာဖြစ်ပေါ်သည့်အခါပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိအနုတ်လက္ခဏာ arousal နဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအနိုင်ရမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဒုတိယစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုစတင်ခြင်းမှာ HRF ခန့်မှန်းသော်လည်း, တတိယစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနောက်ပိုင်းတွင် 1.5 s ကိုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သို့အတွက်ကြောင့်လေ့လာအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုတတိယစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုကလွှမ်းမိုးကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်အန္တရာယ် / မသေချာမရေရာခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်ဆုလာဘ်၏ပမာဏ၏ဒီဂရီနှစ်ဦးစလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ XXX ကအခွအေနေမယ့်အစားတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်သည့်အခါရလဒ်များ၏ valence သောဖြစ်ပါသည်, အနုတ်သည့်အခါမသေချာမရေရာမှတုံ့ပြန်မှုသောအာရုံကြောစနစ်များကိုအလားတူကိုတုံ့ပြန်လျှင်ဆုလာဘ်အပေါ်ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုတစ်စု၏ဖြစ်နိုင်သောအာရုံစိုက်ပေးထားသောကြောင့်စမ်းသပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ် အမြတ်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပိုက်ဆံအနိုင်ရသည့် ventral striatum အတွက်တိုးမြှင့် activation ခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (ဒီဒေသဆုလာဘ်မှတုံ့ပြန်မှုကြောင်းပြသပြီဟုယခင်လေ့လာမှုများ replicatesKnutson et al ။ 2001; လူယာ et al ။ 2003; Huettel 2006) ။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုအနိုင်ရရှိအောက်ပါ striatal activation 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက်အထွတ်အထိပ်သို့နှင့် 10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိနှင့်ဤဒေသမြီးကောင်ပေါက်မှာပိုတုံ့ပြန်မှုသောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိ, (အတွင်းလျော့နည်းသိသာခဲ့သည်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006; Ernst et al ။ 2006; ကာဇီ, Getz, et al ။ 2008).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်သာဆုလာဘ်မျှော်လင့်မှုအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မအလယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် ventral striatum ၏တုန့်ပြန်အတွက်အထွတ်အထိပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်၏အမှန်တကယ်ပေးပို့မတိုင်မီဤဒေသတွင် activation တစ်ခုတိုးသတင်းပေးပို့ပေးသောယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူကွဲလွဲနေသည်။ ဤရွေ့ကားကြိုတင်ရလဒ်များကို (ရလဒ်များများ၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့်မျှော်လင့်အတွက် ventral striatum များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်Knutson et al ။ 2001; Bjork et al ။ 2004; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006; Huettel 2006) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အတွက် ventral striatum တုံ့ပြန်မှုအတွက်အထွတ်အထိပ်သာဆုလာဘ်များလက်ခံရရှိမှုအတှကျအတွေ့သောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုလေ့လာမှုများအတွက် ventral striatum အတွက် activation အကျိုးကိုမဟုတ်ဘဲအကျိုးကို၏ "ဖြစ်နိုင်ခြေ" ထားချက်အရထက်ကိုလိုက်နာလိမ့်မည်ဟု " သိ. " ကိုအစောပိုင်းတုန့်ပြန်ထင်ဟပ်နိုင်, ယခင်စမ်းသပ်ချက်မှာတွေကိုအလားအလာဆုလာဘ်အချက်ပြခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းဘို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုလည်းမြီးကောင်ပေါက်မယ့်ဆုလာဘ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ရယူနိုင်စွမ်းရယူသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအထင်ကြီးကြောင်းအကြံပြုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တာဝန်ဒီဇိုင်းကိုမသေချာမရေရာ A မြင့်ဆုံးနှင့်အဆုလာဘ်ခန့်မှန်းဘို့ခွင့်ပြုမပြုခဲ့သောကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုထဲမှာ, ventral striatum အတွက် activation အတွက်အထွတ်အထိပ်ဆုလာဘ်၏အမှန်တကယ်ပေးပို့သည်အထိစောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါမျှော်လင့်ရလဒ်များကို activation နှင့် ventral striatum အတွက်အခွအေနေအပြန်အလှန်×မျှအသက်အရွယ်တစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအထွတ်အထိပ်မပြခဲ့ဘူးသော်လည်းနောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုဟာမျှော်လင့် striatum တုံ့ပြန်မှုလူကြီးများမှဆွေမျိုးငယ်ရွယ်ပြီးအလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အဘို့အပိုကြီးခဲ့ကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပြောကြား။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအသေးစိတ်ရလဒ်ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်သည့်မျှော်လင့်လေ့လာသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့လူငယ်လူကြီးများ, ဒါပေမယ့်မပေးအစောပိုင်းနှင့်အလယ်အလတ်မြီးကောင်ပေါက်, ဆုလာဘ်များပျက်ကွက်အောက်ပါလက်ဝဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC အတွက်တိုးမြှင့် activation ပြသခဲ့သည်။ lateral OFC ယခင်က (ပြစ်ဒဏ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေထားပြီးO'Doherty et al ။ ၂၀၀၁) ။ အဆိုပါ OFC အဆိုပါ PFC အတွင်းအစာစားချင်စိတ် circuitry နှင့်အခြားဒေသများနှစ်ဦးစလုံးမှအလွန်အမင်းချိတ်ဆက်ဖြစ်ပြီး, မကြာသေးမီကပြုလုပ် OFC သတင်းအချက်အလက် affective ဖို့ဦးနှောက် '' တုံ့ပြန်မှုလမ်းညွှန်နှင့်တစ်ဦးကိုယ်စားပြုမှုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကို update ခြင်းဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဆုံးဖြတ်ချက်ချလမ်းညွှန်က Integrated function ကိုရှိပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် အွန်လိုင်းမက်လုံးပေး-related မျှော်လင့်ချက်များ (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့အတွေ့ O'Doherty 2007 နှင့် Wallis ဟာ 2007) ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC ၏တုန့်ပြန်သောကြောင့်, အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအောက်ပါအပြုအမူများတိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်းအချက်ပြလိမ့်မည်။ ဒါဟာ OFC ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. တစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဒေသနှင့်များစွာသောမေးခွန်းများကိုဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့လိုအပျကွောငျးသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဤဒေသလူကြီးများအတွက်မဟုတ်အစောပိုင်းနှင့်အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်ရှိမလိုလားအပ်သောရလဒ်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိချက်, ပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (သည်အထိရင့်ကျက်ကြဘူးဆက်စပ်သောဦးနှောက်ထဲမှာကွန်ရက်အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006; Ernst et al ။ 2006) ။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက် neuropsychological ရှင်းပြချက်ကိုရှာသောသူတို့မကြာသေးမီအကောင့်အသစ်များ၏အလငျး၌အနက်နိုငျသညျ။ လူမှုပြန်ကြားရေးထုတ်ယူခြင်းကွန်ယက် (SIPN) (နှစ်ဦးစလုံးနယ်လ်ဆင် et al ။ 2005) နှင့် Triadic မော်ဒယ် (Ernst et al ။ 2006) တစ်ခုအစာစားချင်စိတ်အစိတ်အပိုင်းနှင့်တစ်ဦးစည်းမျဉ်း / သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းဆံ့။ ဤအမော်ဒယ်များမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူသည်ခိုင်ခံ့သောအစာစားချင်စိတ်စနစ်နှင့်တစ်ဦးအတော်လေးအားနည်းနေထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SIPN မော်ဒယ် (နယ်လ်ဆင် et al ။ 2005) အစာစားချင်စိတ်ကိုအစိတ်အပိုင်းအခြေခံသောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်နှေးကွေးဖှံ့ဖွိုးတိုးကိုလိုက်နာကြောင်းသိမြင်မှုအဆောက်အဦမှမတူဘဲ, gonadal ဟော်မုန်းမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြပြီးအပျိုဖော်ဝင်စရဲ့အစမှာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ passive ပါရာဒိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အန္တရာယ်အမြင်များ၏အာရုံကြောအလွှာအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူအထောက်အကူပြုသည့်အတွက်လမ်းအကြောင်းကိုမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များအပြုအမူပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ (ဒီစပ်လျဉ်းနှင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း elucidate ရန်အရေးကြီးပါသည်Steinberg 2004; Fareri et al ။ 2008) ။ အဆိုပါရှာဖွေတာကြောင့်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဒေသများဆုလာဘ်အပြုအမူမသက်ဆိုင်သောနှင့်အသေးစားများမှာပင်လျှင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ သာ. တုံ့ပြန်မှုများမှာမရေမရာဆုလာဘ်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မှာလုပ်ငန်းများ၌ထားတဲ့အတွက်လမ်းအတွက်အခြေခံအကျဆုံးခြားနားချက်အကြံပြုထားသည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏ဂေဟစနစ်တရားဝင်မှုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်အလို့ငှာ, အနာဂတ်လေ့လာမှုများအကောင့်သို့ဥပမာအားဖြင့်, အာရုံခံစားမှုရှာ, စိတ်ထားနှင့်ကျားမအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုယူသင့်ပြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးတာဝန်များကိုသုံးပြီးသည်ဤဒေသများဆနျးစစျဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဤလေ့လာမှု၏တစ်ဦးကစက္ကန့်ကန့်သတ်ကျွန်ုပ်တို့သည် 10-12 နှင့် 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိအကြားခြားနားချက်များမှ pubertal အပြောင်းအလဲများကိုများ၏အလှူငွေအနက်ကိုဘော်ပြရနျကြှနျုပျတို့၏စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ pubertal အခြေအနေ, တိုက်ရိုက်အစီအမံရယူမပြုခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာ pubertal ဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများမှအသက်-related အပြောင်းအလဲများကိုပြန်ပြောပြဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
အချုပ်ထဲမှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများအပြုအမူမရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်နှင့်ဆက်စပ်သောကွောငျးတငျပွရလဒ်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောရှိသူများအနေဖြင့်သိသာစွာကွဲပြားကြသည်။ မသေချာမရေရာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်သည့် anterior insula နှင့် striatum အတွက် activation နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, ထို anterior insula အတွက် activation တစ် linear ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသစ်ပြငယ်ရွယ်လူကြီးစောစောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလျော့နည်းစေပါသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ဆုလာဘ်ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ 14-15 တစ်နှစ်ကြားရှိနှင့် 10-12 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက် ventral striatum အတွက် activation အတွက်အထွတ်အထိပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ 18-23 တစ်နှစ်ကြားရှိနှစ်ဦးနှစ်ဖက် OFC ဒေသများတွင် activation ဖေါ်ပြခြင်း, ချန်လှပ်ဆုလာဘ်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းဦးနှောက် circuitry ၏ရငျ့ (တစ်ခုမညီမမျှဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောယူဆချက်ကိုထောကျပံ့et al စေသော။ 2004; Ernst et al ။ 2006; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ 2006) ။ ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာ processing မြီးကောင်ပေါက်များ၏အခြေခံအဆင့်မှာလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမသေချာမရေရာနဲ့ဆက်စပ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိဆုလာဘ်များနှင့်စွန့်စားမှုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။
နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်း မှာတွေ့နိုင်ပါသည်: http://www.cercor.oxfordjournals.org/.
စာရေးဆရာ (EAC နှင့် SARBR) ကသုတေသန NWO VENI / VIDI ထောက်ပံ့ငွေအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအာဘော် 2009 ©။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်က Press ကထုတ်ဝေသည်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ ခွင့်ပြုချက်အဘို့,-mail ကိုငကျေးဇူးပြုပြီး: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
. ကလေးအပြုအမူစာရင်း / 4-18 (CBCL) အတွက်လက်စွဲစာအုပ်. ဘာလင်တန် (VT): စိတ်ရောဂါကုသမှု, ဗားမောင့်တက္ကသိုလ်ဦးစီးဌာန; 1991.
. ဆယ်ကျော်သက်မုန်တိုင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု, ပြန်လည်စဉ်းစား. နံနက် Psychol 1999;54:317-326.
. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ Neurobiology: အန္တရာယ်နှင့်ဆုလာဘ်. seminal Clin Neuropsychiatry 2001;6:205-216.
. အဆိုပါအကျိုးရှိမဟာဗျူဟာ သိ. မတိုင်မီအားသာချက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း. သိပ္ပံ 1997;275:1293-1295.
Fong သည် GW,
Bennett က SM,
. မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: တူညီနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု. J ကို neuroscience 2004;24:1793-1802.
. အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်: multi-ရှုထောင့်သုံးသပ်မှု. dev ဗျာ 2006;26:291.
. ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများမျှော်မှန်းခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏ functional ပုံရိပ်. အာရုံခံဆဲလျ 2001;30:619-639.
. တစ်ဦး SPM Toolbox ကို အသုံးပြု. အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဒေသကြီး; လူ့ဦးနှောက်၏ Functional မြေပုံပေါ်တွင် 8th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ. 2002. ဇွန်လ 2-6; Sendai, ဂျပန်.
. အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်. dev ဗျာ 2008;28:62-77.
. အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်. အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2008;1124:111-126.
. ဦးနှောက်ကို web: တစ် 3D MRI simulated ဦးနှောက်ဒေတာဘေ့စအွန်လိုင်း interface ကို. Neuroimage 1997;5:S452.
. မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းမသေချာမရေရာနဲ့ arousal စပ်လျဉ်းလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု. အာရုံခံဆဲလျ 2001;29:537-545.
ဗန် der Molen MW
. ကလေးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာ - အပြစ်ပေးမှုကြိမ်နှုန်းကိုအကင်းပါးခြင်း၊. ကလေးသူငယ် Neuropsychol 2005;11:245-263.
. စစ်မှန်သောဘဝဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို: ယခင်က ventromedial prefrontal cortex အပေါ်မူတည်မှပြသနေတဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို. dev Neuropsychol 2004;25:251-279.
. ကျောင်းနေအသက်ကြီးသောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: သက်သေအထောက်အထားများနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အသားအရေ conduction ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှ. ကလေးသူငယ် Dev မှ။ 2007;78:1288-1301.
. ဦးနှောက်အတွက်စျေးဝယ်စင်တာများ. အာရုံခံဆဲလျ 2007;53:7-8.
ဗန် Boxtel GJM
. တုံ့ပြန်၏မရှိခြင်းအတွက် Mediofrontal negativities. Cogn ဦးနှောက် Res ။ 2005;25:777-787.
. လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens. Neuroimage 2005;25:1279-1291.
. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Triadic မော်ဒယ်. Psychol Med 2006;36:299-312.
. လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ရေး၏အာရုံကြောအလွှာ: အ ventrolateral prefrontal ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် anterior cingulate cortical. Neuropsychologia 2007;45:1270-1279.
. လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆုလာဘ်-ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲနဲ့: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစား. dev Psychopathol 2008;20:1191-1211.
. orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်. J ကို neuroscience 2006;26:6885-6892.
. ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု. နတ် neuroscience 1999;2:861-863.
Nugent TF 3rd,
. အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ. proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 2004;101:8174-8179.
. အမူအကျင့်, ဒါပေမယ့်မရဆုချ, အန္တရာယ် prefrontal, parietal နှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortical ၏ activation modulates. Cogn ပြုမူနေ neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု 2006;6:141-151.
. မသေချာမရေရာအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်များ: ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာအခြေအနေတွင် prefrontal နှင့် parietal cortical ၏ activation သြဇာလွှမ်းမိုး. J ကို neuroscience 2005;25:3304-3311.
. တိုးမြှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်များမျှော်လင့်ရွေးချယ်နျူကလိယ accumbens စုဆောင်းလေ့ကျင့်. J ကို neuroscience 2001;21:1-5.
. Anticipatory ထိခိုက်စေ: ရွေးချယ်မှုများအတွက်အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်အကျိုးဆက်များ. ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363:3771-3786.
. နျူကလိယကို Activation ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေအပေါ်ဆုလာဘ်တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု mediates accumbens. Neuroreport 2008;19:509-513.
. ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက် circuitry ၏အဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်. Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2004;55:359-366.
. တစ်ဦး passive သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ယာယီခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများလူ့ striatum ကိုသက်ဝင်. အာရုံခံဆဲလျ 2003;38:339-346.
. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို: လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် psychopathology ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်. Psychol Med 2005;35:163-174.
Andrews က C
. လူ့ orbitofrontal cortex အတွက်စိတ္တဇဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုယ်စားပြု. နတ် neuroscience 2001;4:95-102.
. အလင်းအိမ်, camembert, အရေးယူ! encoding ကလှုံ့ဆော်မှု, ဆုလာဘ်များနှင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လူ့ orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို. အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ Annals 2007;1121:254-272.
. အဓိကအရသာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု. အာရုံခံဆဲလျ 2002;33:815-826.
. အန္တရာယ်-ယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းညာဘက် insula အတွက်တိုးမြှင့် activation ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် neuroticism ထိခိုက်စေနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်. Neuroimage 2003;19:1439-1448.
. လူ့ insula activation အဖြစ်ကောင်းစွာအန္တရာယ်အဖြစ်အန္တရာယ်ခန့်မှန်းအမှားများကိုထင်ဟပ်. J ကို neuroscience 2008;28:2745-2752.
. အဆိုပါ orbitofrontal cortex နဲ့ဆုလာဘ်. Cereb Cortex 2000;10:284-294.
. ငွေကြေးဆိုင်ရာအမြတ်၏မျှော်လင့်ပေမယ့်ကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများထဲမှာမအရှုံး. နတ် neuroscience 2007;10:787-791.
. လူ့ဦးနှောက် cortex ၏ Neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ. J ကို neuroscience 2008;28:3586-3594.
. အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်. neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24:417-463.
. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ယူပြီးအန္တရာယ်: အဘယျသို့အပြောင်းအလဲများနှင့်အဘယ်ကြောင့်? အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021:51-58.
. ရှေးခယျြမှုမပါဘဲဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အာရုံခံပျက်ယွင်း. J ကို neuroscience ။ 2008;28:11703-11711.
. စွန့်စားမှုအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်များ၏အာရုံကြောအခြေခံ. သိပ္ပံ 2007;315:515-518.
. somatic အမှတ်အသားများအဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းတာဝန်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်များဖျန်ဖြေပါသလား နတ် neuroscience ။ 2002;5:1103-1104. စာရေးသူကပြန်ကြားချက် 1104.
ဗန် Leijenhorst L,
. စွန့်စားမှုခန့်မှန်းချက်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်. Neuropsychologia 2006;44:2158-2170.
ဗွန် Cramon DY
. ကွဲပြားဖြစ်နိုင်ခြေ၏ဖြစ်ရပ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း: မရေရာ fMRI နေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး. Neuroimage 2003;19:271-280.
. သိမှုဆိုင်ရာအာရုံရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အခြေအနေတွင်အလိုလိုသိဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကိုမှ neuroscience ပြောပြနိုင်. J ကို Cogn neuroscience ။ 2006;18:2077-2087.
. Orbitofrontal cortex နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၎င်း၏အလှူငွေ. အမ်းဗြာ neuroscience ။ 2007;30:31-56.
. Wechsler အရွယ်ရောက်ထောက်လှမ်းရေးစကေး-Revised. New York : စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်း; 1981.
. ကလေးများအဘို့အ Wechsler ထောက်လှမ်းရေးစကေး. 3rd ed. San Antonio တွင် (TX): စိတ်ဓာတ်ကော်ပိုရေးရှင်း; 1991.